သင့်ကောင်လေးက သင့်ကို ချစ်တာထက် သူ့ကိုယ်သူသာ ပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာ (၄) ချက်
Relationship ရဲ့ အစမှာ အရာအားလုံးဟာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်လိုမျိုး မယုံနိုင်စရာပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ စတင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဟာ ဒီဆက်ဆံရေးမှာ နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလိုခံစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တစ်ခုရောက်လာတော့ အရာအားလုံးက ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ကိုယ့်မှာ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ တအံ့တဩကျန်ခဲ့ရတယ်။
တစ်ခုလောက် ကြိုပြောပါရစေ။ ဒါတွေက သင့်အမှားတွေချည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေက သူဟာ ဘယ်တုန်းကမှ သင့်ကို မချစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အရမ်းချစ်ကြတဲ့ အမျိုးသားတွေက အချစ်ရေးအစပိုင်းမှာ ကောင်းမွန်ကြပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့တို့ကို ချစ်လာအောင်ဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တော့ ဘဝအတွက် သံယောဇဉ်တွေနဲ့ တွယ်ကပ်နေပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို စဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ချစ်လွန်းတာကြောင့်ပါ။ သူ့ကိုယ်သူချစ်လွန်းတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ချို့ကို ကြည့်ရအောင်။
၁။ သင့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေအကြောင်း မမေးတော့ဘူး၊ သင်ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်း သူနောက်ဆုံးမေးခဲ့တာ ဘယ်နေ့ကလဲ? သင်မှတ်ရော မှတ်မိသေးရဲ့လား? သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ (သို့) သင့်ရဲ့ အလုပ်တွေအကြောင်း ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တာကရော ဘယ်အချိန်ကနောက်ဆုံးလဲ?
သင်နာကျင်နေချိန်မှာတောင် သူ့ကို ပြန်ပြီးဂရုစိုက်ပေးနေရတယ်။ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာက ဘယ်လောက်ပဲကြမ်းတမ်းနေပါစေ သူ့ကိုပဲ အမြဲလိုလိုဂရုစိုက်ပေးနေရတယ်။ သူ့ရဲ့ ပြဿနာတွေ၊ သူ့ရဲ့ အကျင့်သီလတွေအကြောင်းပဲ ပြောနေရပြီး သူ့ရဲ့ အပြစ်ကင်းမှုတွေအကြောင်းပဲ နားထောင်နေရတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်အကြောင်း တစ်ခုခုပြောဖို့ ကြံလိုက်တိုင်း သူက ကြားဖြတ်ပြီး သူပိုချစ်တဲ့အရာတစ်ခုကို ပြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။
၂။သင်က တစ်ချိန်လုံး ဝေဖန်ခံနေရချိန်မှာ သူက အရာရာပြီးပြည့်စုံနေတယ်
သူက သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်းတွေကို စိတ်မဝင်စားပေမယ့် သင့်ကို ဝေဖန်ဖို့ကတော့ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ကောင်းကောင်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို အမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပြီး သင်ဟာ အကောင်းဆုံးကို မလုပ်နိုင်တဲ့သူလို့ ဝေဖန်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုယ့်သူ ဘယ်လိုနှိမ့်ချရမလဲဆိုတာ မသိပေမယ့် တစ်ဖက်လူကို နှိမ်ဖို့ကျ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ သင့်အားနည်းချက်တွေကိုပဲမြင်ပြီး ဝေဖန်တတ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိနေတာထက် ကိုယ့်အမှားတွေကိုလည်း ကောင်းကောင်းသိပြီး ပြန်လည်ကုစားနိုင်တဲ့ သင့်ကိုယ်သင်ပဲ အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးလိုက်ပါ။
၃။ သင့်ကို ထိန်းချုပ်တယ်
သူဟာ တစ်ခြားလူတွေကို ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ အရူးကြီးတစ်ယောက်လိုပဲ။ သင်တို့နှစ်ယောက် ချိန်းတွေ့ကြချိန်မှာ သင်ပြင်ဆင်လာတဲ့ သင့်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အစားအသောက်ကိစ္စ၊ ချိန်းတွေ့ဖို့ နေရာစသဖြင့် အစစအရာရာကို သူက ချုပ်ကိုင်ချင်တယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူ့ဆီက ဘယ်လိုအကြံပြုချက်တွေကိုမှ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူပြောတာကိုပဲ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပဲ ရတယ်ဆိုပါစို့။
သင်လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုခုအကြောင်းလာပြောနေပြီး သင်ပျော်နေတာကို မုန်းတဲ့လူမျိုးနှင့် သင့်ကို ထိန်းချုပ်တတ်သူက သင့်ကို ချစ်တဲ့လူမဟုတ်တော့ဘဲ လူယုတ်မာတစ်ယောက်လို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
၄။ သင်အပါအဝင် လူတိုင်းအပေါ်ကို လွှမ်းမိုးချင်တယ်
သူ့ကိုယ်သူအရမ်းချစ်လွန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်က ယုံကြည်မှုတွေကလည်း မိုးထိုးနေကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း တစ်ယောက်ယောက်(ဥပမာ- သင့်လိုမျိုး)ကတော့ သူ့အနားမှာအမြဲရှိနေမယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် ဥပဒေကိုမှ မလိုက်နာကြဘဲ အရာအားလုံးရဲ့ အထက်မှာ နေချင်ကြပါတယ်။
သူ့အနားမှာ နေရတဲ့အတွက် သင်ဟာ ကမ္ဘာ့ကံအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်လိုဖြစ်အောင် အမြဲပြောနေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ အောင်ပွဲတွေ၊ အရည်အချင်းတွေအကြောင်း၊ သူဟာ ဘယ်လောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာတွေ ပြောနေပြီး သူ့ကိုယ်သူချီးမွမ်းပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်က သင့်အတွက်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းတွေဆိုတာကလည်း သူကိုယ်တိုင်အတွက်လုပ်ခဲ့တာပဲရှိတာပါ။
သူတို့က တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးကို လှည့်စားတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ သင့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အပေါ် ပြိုလဲကျသွားတာက မထူးဆန်းပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ လိမ်ညာမှုတွေ၊ ဂိမ်းတွေနဲ့ သင့်ကို လှည့်စားနေတာပါဆိုတာကို သိနေပါလျက်နဲ့ ဒီလူရဲ့ ဝေးရာကို ထွက်မသွားနိုင်သေးတာကတော့ သင့်အပြစ်ပါ။ ဒီလိုလူတွေက ပြောင်းလဲလို့ မရတာကြောင့် ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပါနှင့်။ သူ့ကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားရင် သင့်ဘဝကို မဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။ သူက ဘယ်တော့မှ သူ့ကိုယ်သူ ပြုပြင်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။